Iingoma zeMvumi ezinezikolo zeekholeji
Imifula Cuomo (Weezer): I-Bachelor's Degree, iYunivithi yaseHarvard
UTom Morello (ngasekhohlo), iMifula Cuomo (ephakathi), uGreg Graffin (kunene). I-Cuomo ifoto: Marc Andrew Deley-FilmMagic-GettyImages. (Jonga izikwere kwezinye iifoto kwinqaku.)
Uninzi lweenkwenkwezi zengxondorha aziyazi ngokuba ngabafundi abanomdla kakhulu. I-Foo Fighters's frontman uDave Grohl waphuma esikolweni esiphakamileyo njengomntwana osemtsha waza waba ngumnye wabaculi abavumiweyo okanye isizukulwana sakhe. Abadlali abancinane beemvumi zecandelo baye baqhubela phambili imfundo ephakamileyo kwaye bafumana iidridi eziphambili.
Emva kokukhululwa kwe - albhamu yokuqala ye- Weezer ka- 1994, i-frontman Rivers Cuomo ababhalise kwiKholeji yaseHarvard-beya kwiiklasi baze bavale ukususela ngo-1995 ukuya ngo-2006. Waphumelela iCum Laude ngeCachelor yobuGcisa ngesiNgesi waza wanyulwa kwi- Beta Kappa . UCuomo wagqiba isigqibo seminyaka emininzi emva kokuphumelela komculo eneminyaka engama-35. UCuomo wabhala uninzi lwe-albhamu yase-Pinkerton ka-1996 kwi-semester yakhe yokuqala eHarvard waza wabhala i-albhamu phakathi kwemigangatho.
UBrian May kunye noRoger Taylor (iNkosona): i-Bachelor's, Ph.D. (NgoMeyi), iKholeji yase-Imperial
URoger Taylor kunye noMeyi kaMeyi weNdlovukazi. UBen Pruchnie-GettyImages
U-Queen Queen u-Brian May udibana noRegresser drummer uRoger Taylor emva koMeyi wabeka isikhangiso kumculi waseMondon we-Imperial College. Ngamanye angabumba iqela leSmile kunye noTylor eliqhekeza ngo-1969. NgoMeyi noTylor bamisa uMthekazi ngo-1970 kunye nomculi uFreddie Mercury kunye no-bassist uJohn Deacon baze bakhulula i-albhamu yabo eyi-album yokuqala ngo-1973. IHollywood Hall yase-Imperial College. UTylor wathola i-bachelor degree kwi-biology esuka kwi-Imperial College. NgoMeyi uphumelele kwi-Imperial College ufumana i-bachelor degree in the mathematics and physics kunye neendumiso. Mhlawumbi kamva wathola iP.D. kwi-astronomy esuka kwi-Imperial College ngo-2007.
UGreg Graffin (Unqulo Lwenkohlakalo): Ph.D., iYunivesithi yaseConell
UGreg Graffin. Ollie Millington-GettyImages
Umfundisi onguMninimbi onguGreg Graffin ulinganise ubomi bakhe bomculo kunye neminyaka eminyaka. IGriffin iphakanyiswe kabini kwi-anthropology kunye ne-geology njengesiqendu se-UCLA. Waqhubeka nokufumana i-degree degree kwi-geology esuka ku-UCLA waza wafumana iPhD. kwizilwanyana zaseYunivesithi yaseConell. Phakathi kwee-Albhamu zeNkolo ezimbi kunye neendwendwe iGriffin uye wafundisa i-Life Science 1 kwi-UCLA ngo-2009 kunye ne-Evolution kwiYunivesithi yaseConell ngo-2011.
Jeff Schroeder (Smashing Pumpkins): Ukugqiba i-Ph.D. yakhe, u-UCLA
UJeff Schroeder we-Smashing Pumpkins. UBrian Rasic-GettyImages
Ngonyaka ka-2006 uJeff Schoeder waba ngumbini wegitare we -Smashing Pumpkins esikhundleni sikaJames Iha. USchroeder uhlala yilungu elilodwa eliqhubekileyo leqela ukususela ekuhlanganiseni kwabo ngaphandle kwe-frontman uBilly Corgan. Ngaphambi kokujoyina i-Smashing Pumpkins Schroeder yafumana i-deghelor's and degrees's master degrees kwaye iphetha i-Ph.D. kwiincwadi zokuthelekisa kwi-UCLA. Nangona uSchroeder wayecwangcise ukuba nguprofesa emva kokufumana i-Ph.D. wafaka ezo zicwangciso ngokubamba ngenxa yeshedyuli yeS Smashing Pumpkins.
UTom Morello (Uhlaselo oluMelana neMashishini): I-Bachelor's Degree, eHarvard
Tom Morello weRage Against Machine / Audioslave. Robert Knight Archive-Redferns-GettyImages
Umdala weRage Against Machine / i- Audioslave guitarist uTom Morello ophumelele kwi-University yaseHarvard efumana i-bachelor degree kwizifundo zezenhlalakahle ngaphambi kokuqalisa umculo. I-Morello ihlala isebenzayo kwizinto zentlalo njengokuba ngumsebenzisana-ndawonye (kunye neNkqubo ye- Downmanman phambi kwe-Serj Tankian) yentlangano engeyona inzuzo yezopolitiko.
UDexter Holland (Umntwana): I-Bachelor's and Master's Degrees, USC
Dexter Holland weNzala. Jo Hale-GettyImages
Ngaphambi kokuba ube ngumphathi we-Offspring Dexter Holland wayengumgcini-mkhulu kwisikolo sakhe esiphakeme. I-Holland yaqhubela phambili ukuphumeza i-bachelor degree kwi-biology kunye ne-degree degree kwi-biological molecule kwi-USC. Ngoxa esebenza kwi Ph.D yakhe. kwi-biology ye-molecular I-albhamu yase-Offspring ka-1994 uS Smash yaba yintsikelelo kunye ne-Holland yanyusa izifundo zayo. Ngomnye u-1995 udliwano-mali u-Holland wathi, "Andiyi kuthanda ukudlala umculo xa ndimashumi amane, ndingathanda ukuba nguprofesa kwiyunivesiti." Nangona i-Holland ihlala isemsebenzini osebenzayo, kwiminyaka engama-49 usenokwenza i-albhamu kunye nokutyelela kunye neNkomo mhlawumbi ngenxa yokuba ihlawuleka kangcono kunokufundisa.
Imbali kaSimon noGarfunkel
Ukukhusela Iiplastiki zePing-Pong Balls
Ndiza Kuhlala Ndikuthanda Kwimbali
Indlela yokukhetha ezininzi kwiDelphi DBGrid
Ukukholelwa kuThixo kunye nexesha elikhoyo